Ungawudlala kanjani umsindo ngasikhathi sinye kuzikrini eziningi | Kusuka kuLinux
Ungawudlala kanjani umsindo ngasikhathi sinye kuzikrini eziningi
Wolf | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ake sithi ikhompyutha yakho ixhunywe kuma-monitors amabili, ngemodi yesibuko. Ake sithi omunye walabo abaqaphi uyithelevishini enkulu egumbini lokuphumula, lapho uvame ukudlala khona ikhonsoli noma ubuke ama-movie. Ake sithi uyalwazi lolu hlelo KODI (ngaphambili I-XBMC), ongumlamuleli, noma I-SMPlayer, nokuthi usebenzisa iPulseAudio, kepha lapho kudlalwa ifayili ayikho indlela yokuzwa umsindo kusiqaphi sesibili ngaphandle kokwenza ama-pirouettes noma shintsha ukucushwa ebhuthini ngalinye. Uma kunjalo ngawe, lesi sifundo singakuthakazelisa, ngoba senzelwe ngokukhethekile amasistimu acabanga ngomlamuleli.
1 Izinyathelo ezedlule
2 Khetha indawo elungile
3 Kuthiwani uma ngifuna ukuthulisa amadivayisi athile noma ngishintshe ivolumu ngokuzimela?
Izinto zokuqala kuqala, ngakho-ke kuzofanele sifake iphakheji okube. I-frontend ehlelwe ku-GTK ukumisa izinketho ezithile zePulseAudio.
En I-Archlinux kanye nokuphuma kokunye:
En Ubuntu nokunye
Ngenxa yale software elula, sizokwazi ukunika amandla i- «virtual device», ebizwa Okukhipha kanyekanye, okungeyona into ngaphandle kokukhishwa ngasikhathi sinye kwawo wonke amadivayisi womsindo axhunywe kwimishini yethu. Ukwenza lokhu, senza umyalo ku-terminal okubeUkomisa, bese siya kuthebhu yokugcina, lapho kuzodingeka ukuthi sisebenzise ibhokisi elitholakalayo kuphela, njengoba kuboniswe ku-skrini.
Qaphela inani lezinketho; ukungezwani kuyinsakavukela.
Khetha indawo elungile
Ngemuva kokuvala ibhokisi lokumisa le-paprefs, kufanele sihlole amadivayisi wethu wokudlala futhi sibone ukuthi inketho yesikhathi esisodwa ivele isivele. Indlela yokuphatha izinguquko zomsindo kuya ngemvelo yedeskithophu esiyisebenzisayo, kodwa izindawo eziningi zamanje zisivumela ukuthi sishintshe idivayisi endizeni kusuka kusithonjana sevolumu kuphaneli. Ngaphandle kwalokho, kuzofanele siye kokuncamelayo kwesistimu bese sitshuza phakathi kwezinketho ezihambisanayo.
Uma ukuphuma ngasikhathi sinye kungekho lapha, qala ubheke ngaphansi kwesihlalo.
Lapho nje idivayisi entsha isikhethiwe, ikhompyutha yethu izosakaza umsindo kuzo zonke iziteshi ezinikwe amandla. Uzosebenzisa izipikha, izixhumi ze-HDMI, i-flux capacitor, njll. Uma sine-headphone ye-Bluetooth exhunywe kwikhompyutha (noma exhunywe ngekhebula), kungenzeka ukuthi umsindo ozenzakalelayo nawo ukhishwe yiwo, kuya ngohlobo lokucushwa esinakho. Ngiqonde ukuthi uma sizibekele ukuthi umsindo uthuliswe kuyo yonke imiphumela lapho amahedfoni esebenza, yilokho okuzokwenzeka, isibonelo.
Kuthiwani uma ngifuna ukuthulisa amadivayisi athile noma ngishintshe ivolumu ngokuzimela?
Konke kungenzeka emhlabeni we-Linux, kufanele nje umbe okungaphezulu bese uqhubeka nokulungisa imiphumela. Kulokhu kungcono ukufaka olunye uhlelo oluncane oluzosivumela ukuthi silinganise ngokuthanda umsindo ngokuphelele: I-Pavucontrol. Ngokwami, ngikuthola kunamandla amakhulu futhi kunokwethenjelwa ukwedlula ama-configurators ajwayelekile.
En I-Archlinux nama-distros ahlobene:
En Ubuntu nomndeni
Lolu hlelo lunconywa kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi kusivumela ukuthi sixazulule izinkinga ngaphandle kwesixazululo lapho siphatha amadivayisi ahlukile kusistimu yethu. Ngaphandle kokuqhubeka, lapho ngisebenzisa ama-headphone ami e-Bluetooth, iphrofayili ephezulu yokwethembeka, i-A2DP, kwesinye isikhathi ayingibambi kahle, kepha iPavucontrol ingivumela ukuthi ngixazulule le nkinga ebucayi kakhulu futhi ngiqhubeke nokujabulela umculo ngaphandle kokuthi kubukeke sengathi amakhasethi wamakhasethi angenele computer futhi ngadla ama-albhamu wami.
Kuthebhu Yezilungiselelo singavumela noma sivale amadivayisi ngendlela efanele, futhi siguqule iphrofayili yabo, inani leziteshi (2.1, 5.1, njll.). Ngokuzithandela, kuthebhu yamadivayisi wokukhipha singashintsha izinga levolumu ngokwehlukana, sikhethe izinga lokucasula esifuna ukulidalela omakhelwane bethu.
Futhi uma ngaphandle kwayo yonke imizamo yethu yokuzikhandla singakakwazanga ukuthola i-KODI, i-SMPlayer noma i-Amarok ukuthola umsindo lapho sifuna khona, kuzokwanela ukuvula iPavucontrol ngokufana bese ukhetha okukhishwayo okufunwayo kuthebhu ye-Playback. Kulesi sigaba esifanayo, singathola umsindo kusuka kuhlelo lokusebenza ngalunye ngedivayisi ehlukile (ngokwesibonelo iFirefox ngamahedfoni, i-Amarok nge-HDMI ne-KODI ngokukhipha ngasikhathi sinye).
Yilokho kuphela okwamanje. Ngiyethemba ukuthole kuwusizo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungawudlala kanjani umsindo ngasikhathi sinye kuzikrini eziningi
UJuan Manuel kusho
Ngibonga kakhulu! Izolo nje bengibhekene nale nkinga ngaphandle kwempumelelo e-Arch. Ngikwazile ukuthola umsindo ophuma kwi-hdmi ngisebenzisa i-SMPlayer, kepha angizuzanga okufanayo ku-Kodi okuyikhona engikudingayo. Ngizozama lo mhlahlandlela.
Phendula uJuan Manuel
Kokuncamelayo kwe-Kodi Audio ungashintsha futhi idivayisi ekhishwayo, uma kwenzeka ingakubambi ngokuzenzakalela okukhipha ngasikhathi sinye. Ngiyethemba kuyakusiza; uzositshela.
Kulungisiwe, ungangeza idivaysi ebonakalayo futhi isebenza kahle. Bengivele ngizamile izilungiselelo zomsindo we-Kodi kepha bekungekho msindo ophuma kwi-HDMI. Ngibonga kakhulu
Okokuqala, lokhu ukugxeka okwakhayo.
Ngiqale ukufunda i-athikili ngoba eminyakeni embalwa edlule ngithole inketho ye-pulseaudio yokwenza amadivayisi abonakalayo futhi ngasikhathi sinye ukukhipha wona. Kepha ngeqiniso, noma ngubani oqala ukufunda i-athikili yakho (futhi bengivele ngazi ukuthi isihloko besikhuluma ngani) uyalahleka. Uqala ukukhuluma "ngokuqagela" kepha unganiki imininingwane maqondana nokuthi iyiphi i-hardware esinayo (ama-monitors amabili noma amathelevishini, eyodwa ene-HDMI input bese enye ine-VGA, ukubeka okuthile nekhompyutha okukhipha i-HDMI kanye nenye i-analog .. .). Lokho wukuthi, isimo oqala kuso siyindida ngokuphelele, awucacisi ukuthi siqala kuphi nokuthi yini esifuna ukuyixazulula. Ekugcineni, yonke into kufanele "icabange." Uxolo, kepha untula imininingwane.
Esimweni sami, nginekhompyutha enomkhiqizo we-analog owakhelwe ebhodini, kanye nokukhishwa kwe-HDMI, eyakhelwe ikhadi lehluzo leNvidia. Inhloso bekuwukuba nesiginali efanayo yomsindo ngemiphumela emibili (i-analog yomculo ongemuva ne-HDMI yethelevishini). Isixazululo bekungukuthi, ngempumelelo, ukusebenzisa inketho yokwenza idivaysi yomsindo ebonakalayo ngePulseadio bese ukhetha okukhiphayo kuyo kuzo zonke izinhlelo zokusebenza umsindo wazo ofuna ukuwulalela ngasikhathi sinye kwimiphumela yomsindo eshiwo.
Ngiyabonga noma kunjalo ngokuphawula
Ukugxekwa okwakhayo kuyamukelwa, yize inhloso yale divayisi ebonakalayo ilusizo kunoma yikuphi ukumiswa, yingakho bengingacabangi ukuthi kunesidingo ukucacisa, ngaphandle kokuthi mhlawumbe nginike isibonelo. Ngenza ireferensi ecacile kuzo zombili izikrini, okuyisethaphu yami, kepha ngiyazi ukuthi isebenza kwabanye. Ukuqagela okusetshenziswe ekuqaleni kuyithuluzi lokubhala, ukuxoxa indaba, hhayi ukuvivinya.
Njengoba kunikezwe ukuthi isihloko sixwayisa ngenhloso yesifundo, okungukuthola umsindo ngezikrini eziningana ngasikhathi sinye, futhi ngenxa yokucaciswa kwendaba, ngithanda ukucabanga ukuthi akulula kangako ukudideka.
Kodwa-ke, ngiyabheka futhi ngizozama ukuthuthuka.
UMiguel O. kusho
Ngiyabonga kakhulu, bengifuna indlela yokwenza lokhu futhi angikwazanga ukuthola isisombululo, kimi ngeLinux Mint (Isinamoni).
Awuyeke ukufunda izinto ku-Linux.
Phendula uMiguel O.
Ukufakwa kweFirefox OS 2.0 ku-Alcatel One Touch Fire ngeLinux Mint
Imenyu elungisekayo yeCinnamon